समावेशिता स्विकार नगर्ने संविधान दिवस मान्दैनौं(अन्तर्वार्ता) – Everest Times News
२०७५ आश्विन २, मंगलवार २०:१०
सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दीपावलीसहितको विभिन्न कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिए पनि आदिवासी जनजाति महासंघ भने संविधान दिवसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ । आफू मातहतको जिल्ला कमिटी र विभिन्न देशमा रहेका समितिहरूलाई संविधान दिवसको विरोधमा कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
विभिन्न जिल्ला र प्रदेश समितिहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको र अब केही दिनमा संविधानको विरोधमा देशैभरी आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यिनै विषयहरूमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग गरेको कुराकानी :
आदिवासी जनजाति संविधान दिवसको विरोधमा किन?
लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति उत्पीडनमा परेको सर्वविदितै छ । राज्यबाट विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूलाई दबाउँदै आइएको छ । आदिवासी जनजातिको विरोधका बाबजुद पनि संविधान जारी भयो ।
यो संविधानले समानुपातिक समावेशीलाई पूर्ण कार्यन्वयन गराउनु पर्ने थियो तर त्यो भएन । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम र संख्याको निर्धारण हुन सकेन। आदिवासी जनजातिको माग बमोजिम संघीय संरचनाको यो संविधानले दिन सकेन। स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र पनि निर्धारण गरिएन ।
यो संविधानले आदिवासी जनजातिलाई चाहिने केही दिन सकेन । झन् आदिवासी जनजातिलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको छ । जबसम्म त्यो षड्यन्त्रहरू समाप्त हुँदैन तबसम्म आदिवासी जनजातिले संविधानको विरोध गरिरहनेछ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भन्दै आएको छ नि?
संधिवान संशोधनको एजेन्डा लिएर फोरम सरकारमा गएको छ तर अहिलेसम्म कुनै विषय अगाडि बढेको छैन । पहाडका एक खालका राजनीति दल र मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सामन्ती सोचबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । उनीहरुले पनि संविधान संशोधन होस्, आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले अधिकार पाओस् भनेर चाहेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छैन ।
त्यसो भए संविधान दिवसमा वहिस्कार नै हो?
हामीले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला समिति र विभिन्न देशमा रहेका समितिहरूलाई संविधानका विरोधमा कार्यक्रम गर्न परिपत्र गरेका छौं । सबैले आ–आफ्नो बमोजिम संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्दैछ ।
सरकारले हामीलाई बोलाएको कार्यक्रम बहिष्कार गर्दैछौं । हामी विरोधका कार्यक्रम गर्दैछौं ।
भोलिका दिनमा महासंघले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ ?
आदिवासी जनजाति महासंघले अव संविधानको विरुद्धमा देशैभरी विशाल आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने छ ।
अहिले हामी विभिन्न जिल्ला कमिटीहरूलाई सशक्त बनाउँदैछौं। प्रदेश २ मा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । अब अन्य प्रदेशहरूमा पनि प्रशिक्षणको काम अगाडि बढ्दैछ ।
सबै जिल्ला र प्रदेशमा प्रशिक्षणको काम सकेपछि हामीले देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौं । अहिले हामी तयारीमा छौं ।-हुलाकीन्युज डटकमबाट